Famoronana siantifika sy teknolojia aostralianina | Fitsangatsanganana tanteraka
Luis Martinez | | Aostralia
Tsy dia betsaka loatra ny famoronana siantifika sy teknolojia aostralianina toa izay hita any amin'ny firenen-kafa manerantany. Tsotra ny antony: Aostralia firenena io somary tanora ary, tsotra, tsy nanam-potoana hanasongadinana zavatra betsaka momba ireo sehatra ireo.
Na izany aza, ny firenena amoron-dranomasina dia efa nanome ny anjarany amin'ny zavatra hita. Ary, ambonin'izany rehetra izany, an'ny manan-danja lehibe amin'ny siansa ary tena malaza amin'ny lafiny teknika. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny famoronana siantifika sy teknolojia aostralianina ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1 Ny famoronana siantifika sy teknolojia lehibe any Aostralia
1.1 Fikarohana siantifika aostralianina
1.1.1 Ny fampiasana penicillin
1.1.2 Ilay mpampandry tany
1.1.3 Ny vaksinin'ny papilloma olombelona
1.1.4 Ny implant cochlear
1.1.5 Ny scanner ultrasound
1.1.6 Fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny haran-dranomasina
1.2 Famoronana teknolojia aostralianina
1.2.1 Ny wifi
1.2.2 Ny boaty maintin'ny fiaramanidina
1.2.4 Ny fandavahana herinaratra
1.2.5 Ny vata fampangatsiahana
Ny famoronana siantifika sy teknolojia lehibe any Aostralia
Araka ny efa nolazainay taminao, dia efa betsaka ny zavatra hitan'ny aostralianina. Noho io antony io ary mba hampazava kokoa ny fampirantiana dia hiresaka voalohany momba ny sasany manan-danja indrindra amin'ny siansa isika ary avy eo ny hafa izay manandanja indrindra amin'ny haitao.
Fikarohana siantifika aostralianina
Mikasika ireo, ny famoronana Aostraliana dia nahazo tombony tamin'ny Ny fahasalaman'ny olombelona (araka ny ho hitantsika eo noho eo, misy ifandraisany amin'ny penicillin aza) ary amin'ny tontolo iainana. Ny sasany amin'ireto fikarohana ireto dia holazainay aminao.
Ny fampiasana penicillin
Fantatry ny rehetra fa ny penisilinina dia hitan'ny anglisy Alexander Fleming tamin'ny 1928. Na izany aza, tsy dia fantatra loatra dia ny Aostralianina izy ireo Howard W. Florey ary alemanina Ernst B. Chain izay namolavola ny fomba fanamboarana betsaka, zavatra izay hamonjy ain'olona an-tapitrisany amin'ny farany. Raha ny marina, rehefa nahazo an'i Fleming ny Nobel Prize tamin'ny taona 1945 dia niara-nanao azy roa mpiara-miasa izy.
Plaque ho fanomezam-boninahitra an'i Ernst B. Chain
Ilay mpampandry tany
Ity fitaovana fitsaboana ity dia ahafahan'ny marary am-po mitazona ny azy ireo amin'ny kapoka mahazatra. Mandefa fikorontanana elektrika kely amin'ny taova izy mba hanampiana azy hanao izany. Ilay physicist no namorona azy Trano fisakafoanana Edgar ary ny dokotera Marc Lidwill, samy Aostralianina, tany am-piandohan'ny taona 1920. Na izany aza, tsy nanjary fahita ny fampiasana azy raha tsy tamin'ny XNUMX.
Ny vaksinin'ny papilloma olombelona
Na dia niditra an-tsehatra aza ny manam-pahaizana hafa, ity vaksininina ity dia isan'ireo noforonin'ny siansa sy teknolojia aostralianina ho azy manokana Mpandalina roa avy amin'ny University of Queensland izy ireo, Ian Fraser y Jian Zhou, izay nahavita namorona sombina mitovy amin'ity virus ity izay nanamafy ny hery fiarovan'ny hery manohitra azy.
Ny implant cochlear
Ity fitaovana ity dia nanampy marenina an'aliny maro hanatsara ny fandrenesany. Natsofoka tao an-doha izy ary nahavita nanentana ny hozatra fihainoana. Izy izay dia Graeme clark, mpampianatra iray ao amin'ny University of Melbourne, izay namorona azy. Ny rainy dia nijaly tamin'ny fihainoana, ary raha nanandrana nanampy azy izy dia nahita io fitaovana tena ilaina io.
Ny scanner ultrasound
Ity fitaovana fitsaboana ity izay ampiasaina ankehitriny hanaovana ultrasounds Ny Laboratoara Commonwealth Acoustics Laboratoire aostralianina no namorona azy, izay avy eo dia notondroina marina tsara ny anarany Ivon-toerana ultrasound. Ireo mpamorona azy dia nahita fomba hisamborana ireo akony ultrasonikaly izay mipoitra avy ao amin'ny vatantsika ary manova azy ireo ho sary. Nanomboka tamin'ny 1976 ny fivarotana azy.
Fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny haran-dranomasina
Araka ny fantatrao, ny Haran-dranomasina lehibe any avaratra atsinanan'i Aostralia io. Misy drafitra anaty rano maherin'ny roa arivo sy iray hetsy izay tandindomin-doza izao. Angamba izany no antony naha-lohalaharana an'i Aostralianina hatrany oceanography.
El Ivon-toerana momba ny siansa aostralianina mamolavola tetikasa isan-karazany hitehirizana ny tontolo iainana. Anisan'ny malaza indrindra ilay natokana ho an'ny fambolena haran-dranomasina voafehy. Ny tanjony dia ny hamerina ny haran-dranomasina amin'ny toe-piainana voajanahariny. Ary ireo dia zavamananaina velona mandray anjara amin'ny fifandanjana tontolo iainana ny ranomasina ary hiarovana azy ireo amin'ny vokadratsin'ny fiovan'ny toetrandro aminy.
Famoronana teknolojia aostralianina
Ny famoronana teknolojia aostraliana malaza indrindra dia tsy isalasalana fa Wifi, izay horesahintsika manaraka. Fa misy kosa ireo hafa izay nanatsara ny fiarovana ny rivotra na amin'ny tanjona hafa. Andao hojerentsika izy ireo.
Ny fifandraisana tsy misy tariby amin'ny Internet dia tonga mba hanamorana ny fampiasana an'io amin'ny trano sy birao. Fitaovana mahasoa toy izany dia noho ny mpahay siansa aostralianina John O'Sullivan sy ny ekipany mpiara-miasa amin'i Sidney. Izy rehetra dia an'ny CSIRO, vatan'ny Commonwealth natokana hampiroboroboana ny fikarohana siantifika sy teknolojia.
Ny boaty maintin'ny fiaramanidina
Araka ny fantatrao, ity fitaovana ity izay ampidirina anaty fiaramanidina manerantany dia ampiasaina mba hahitana izay mitranga ao anaty fiaramanidina mandritra ny fotoana fohy talohan'ny loza. Ny resadresaka rehetra ataon'ny mpanamory sy ny masontsivana ao anaty fiaramanidina dia voarakitra ao anatiny, izay tsy azo simbaina ihany koa. Ny mpamorona azy dia ny Aostralianina David warren, izay namoy marina ny rainy tamin'ny fianjerana fiaramanidina.
Tsy io ihany no fandraisana anjaran'ny firenena any amin'ny ranomasina amin'ny fiarovana ny sidina. Tamin'ny 1965, Jack Grant, mpiasan'ny seranam-piaramanidina Quantas, no namorona ny solafaka ho an'ny vonjy taitra. Izy io dia ampiasaina hampihenana ny mpandeha aorian'ny fiantsonana ratsy.
Na dia tsy nantsoina tamin'izany aza dia io fitaovana tena ilaina io no noforonin'ny aostraliana Stephen Ma y Neil Gordon miaraka amin'i Danes Lars sy Jens Rasmussen tany am-piandohan'ny taona XNUMX. Taty aoriana, rehefa novidian'ny Google ilay famoronana dia nahazo ny anarany ankehitriny izy io.
Boaty maintin'ny fiaramanidina
Ny fandavahana herinaratra
Raha tianao ny DIYers, dia ho fantatrao fa manamora ny asanao ity fitaovana ity. Eny, famoronana iray avy any Aostralia ihany koa io. Amin'ity tranga ity dia noho ny injeniera elektrika Arthur James, izay nanao ny voalohany hatramin'ny 1889. Mazava ho azy, avy eo, tsy azo entina izy io, fa lehibe kokoa. Na izany aza, afaka nanindrona na dia ny vato aza izy io.
Ny vata fampangatsiahana
Ny vata fampangatsiahana nentim-paharazana izay toa ilaina ankehitriny any an-tranontsika dia manodidina ny dimam-polo amby zato taona. Rehefa tsy nisy izany dia notehirizina tany amin'ny toerana mangatsiaka indrindra ao an-trano ny sakafo. Mahaliana fa ny mpitantana orinasa mpamokatra labiera aostralianina no nanakarama James harrison hamaha ny olan'ny fitahirizana zava-pisotro misy azy amin'ny 1856.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany amin'ireo Famoronana siantifika sy teknolojia aostralianina. Araka ny hitanao, ny fandraisana anjaran'ny firenena ranomasimbe amin'ny fampandrosoana ny zanak'olombelona dia mihoatra ny mahaliana ary, indrindra indrindra, zava-dehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Famoronana siantifika sy teknolojia aostralianina
ana mercedes villalba G. dia hoy izy:
Tena tsara izay lazain'izy ireo na azavainy
Mamaly an'i ana mercedes villalba G.
n dia hoy izy:
tsara ny manazava